Interview of Sw Anand Arun in Nagarik News — आवरण/प्रणय दिवस-सभ्यताको जन्जिरमा प्रेम : Osho Tapoban
काठमाडौं– विश्व सम्पदास्थल हनुमानढोका मन्दिर क्षेत्र त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँका टुँडालमा प्रेमअभिव्यक्तिका अनेक भाव र भंगिमाका कलात्मक दृश्य कुँदिएका छन्।
प्रेमका निःशब्द अभिव्यक्तिले त्यहाँ पुग्ने जोकोहीलाई द्रविभूत मात्र बनाउँदैन, स्पष्ट सन्देश दिन्छ– संसार प्रेमको मन्दिर हो, यहाँ बेपर्वाह प्रेम गर, निष्पि्कक्री, निर्विघ्न प्रेम साट।
‘देउताका पाला’ मा समेत प्रेमभावलाई समुच्च स्थान दिइएको शाश्वत र ऐतिहासिक सन्देश दिने त्यही ठाउँ अचेल प्रेम गर्नेहरूका लागि वर्जित स्थलका रूपमा चिनिँदैछ। मन्दिर परिसर पुगेर प्रेम अभिव्यक्त गर्ने प्रेमिल जोडीलाई सामाजिक मान्यता र सम्पदा संरक्षणका नाममा धपाइन्छ, समाइन्छ र प्रहरी हिरासतसम्म पुर्या्एर अनेक दुःख दिइन्छ।
यसको अर्थ हो, समाज नै खुला र उन्मुक्त देख्न चाहँदैन प्रेमलाई, बरु जानी–नजानी मान्यताका जन्जिरले बाँध्न चाहन्छ।
राजधानी सहरमा प्रेम बेहद खुल्न चाहिरहेछ, तर जताततै अवरोध नै अवरोधले कुण्ठित छ। त्यसको अर्काे उदाहरण हो– टौदह।
चोभार हुँदै दक्षिणकाली जाने बाटोमा रहेको टौदह पछिल्ला दिन प्रेमिल जोडीको रोजा गन्तव्य बन्दै थियो। सामाजिक संस्कार र कानुनले निगरानी थालिहाल्यो। ठूलाठूला अक्षरले प्रेम गर्न मनाही गरिएका बोर्ड टाँगिए। अचेल त त्यहाँ पुग्नेहरूमाथि कडा निगरानी राखिन्छ। जोडीलाई अपमान गरिन्छ। र, प्रेम अभिव्यक्त गरेबापत जरिवाना नै तिराइन्छ।
सहरमा प्रेम न खुला छ न अलि छेकिएर अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ नै। सभ्यताले प्रेमको पूजा गर्न सिकाएको छ तर समाज यसको निन्दा गरिरहेछ।
सहरमा मनपरी बोल्दै हिँड्ने र झगडा गर्नेहरूसँग भन्दा माया गर्नेहरूप्रति समाज किन खलनायक बन्दैछ?
यो सुन्दर नगरीमा किन वर्जित हुँदैछ प्रेम?
यहाँ क्रोध सजिलै सार्वजनिक गर्न सकिन्छ तर प्रेम किन लुकाउनुपर्छ?
छोराछोरीका अगाडि बाबुआमा मुक्कामुक्की गर्न धक मान्दैनन्, माया गर्न भने ढोकामा चुक्कुल नै लगाउनुपर्छ। बाटोमा हात समातेर हिँड्नु, अंकमाल र चुम्बन गर्नु त छाडापनको हद ठहरिन्छ। त्यही बाटोमा आँखा तर्नु, नमिठो बोलीबचन गर्नु र हात हालाहाल गर्नुलाई सामान्य ठानिन्छ।
टेलिभिजनमा केटा र केटीले चुम्बन गरेका दृश्य आए अभिभावक आफ्ना केटाकेटीका आँखा छोप्न हतारिन्छन्। त्यही अभिभावक दक्षिण भारतका अत्यधिक मारधाडयुक्त हिंसाप्रधान सिनेमा केटाकेटीकै सामु निर्धक्क हेरिरहेका हुन्छन्।
समाज र परिवारको आँखा छल्दै ‘प्रेम गर्न’ चारभञ्ज्याङ काट्यो, पुलिसले ढोका ढकढक्याउँछ, उस्तै परे हतकडी नै लगाउँछ। अनि ‘प्रेम गरेकै’ कारण इज्जत माटोमा मिल्न बेर लाग्दैन।
यो समाज ढोंगी र परम्परावादी नै रहिरहनुको परिणाम हो। प्रेम गर्नुुहुन्न भनिन्छ र लुकिलुकी गरिन्छ। तर, कसैले अस्वीकार र निन्दा गरेकै कारण प्रेमको मूल पलाउन बन्द हुँदैन। यो शाश्वत सत्य हो।
तपोवनका स्वामी आनन्द अरुण ठान्छन्, प्रेम अनादिदेखि चलेको र अनन्तसम्म चलिरहने भाव हो। जसले प्रेमको यो मौलिक तथ्य बुझ्छ, उसले प्रेम गर्ने स्वीकृति दिन्छ। स्वीकृति नपाएको ठाउँमा पनि प्रेम चलेकै हुन्छ।
उनको विचारमा प्रेम दबाउने चिज हुँदै होइन। त्यसो गरिए एकदिन विस्फोट हुन्छ। प्रेम दबाउन खोजेकै कारण नाम चलेका ‘ब्रह्मचारी’ धर्मगुरु ‘सेक्स स्क्यान्डल’ मा मुछिने घटना उनी सम्झन्छन्। प्रेम र सेक्सबाट मुक्त गुरुहरू बिरलै भेटिने उनको अनुभव छ।
स्वामी अरुणका अनुसार प्रेमको भोक नैसर्गिक छ। भोक लागेपछि कसैले स्वीकार गरे पनि खानुपर्छ, नगरे लुकेर पनि पेट भर्नुपर्छ। खुल्न नपाएपछि लुकिछिपी भए पनि प्रेमको भोक मेटाउनु परिस्थितिकै नतिजा हो।
अरुणको प्रवचन सुन्न तपोवन जानेहरूमा त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् जो प्रेम र सेक्सको प्रसंग आयो भने हलबाटै बाहिरिन्छन्। र, भन्छन्, ‘छिः स्वामीजीले पनि के यस्तो कुरा भन्नुभएको होला!’ उनको अनुभवमा यो क्रम घट्दो छ, हटेको छैन।
मान्छेको द्वैध चरित्रको नमुना हो यो। प्रेमलाई इज्जत र प्रतिष्ठासँग गाँस्नु, प्रेम गरे इज्जत जान्छजस्तो गर्नु अरुणको परिभाषामा ढोंग हो। जो ढोंगी छन्, ती पैसा बोकेर बैंकक वा विदेशका अन्य सहर जान्छन् र कुण्ठा निकाल्छन्। उता जे गरेर आउँछन्, यता त्यो गर्न नहुने विषय जसरी प्रवचन दिन्छन्। यस्तो दोहोरो जीवनको विरोध गर्दै उनी भन्छन्, ‘खाने र देखाउने दाँत छुट्टाछुट्टै भएकाहरू पापी हुन्, पाखण्डी हुन्।’
हाम्रो समाजमा चरित्रलाई प्रेम र सेक्ससँग जोडेर बुझ्ने गरिन्छ। प्रेम गर्नेको ‘चरित्र’ मा दाग लगाइन्छ। चरित्रवान बन्न प्रेम र सेक्सको ‘स्क्यान्डल’ बाट बचे पुग्छ, अरू जे अपराध गरे पनि भयो। कर छल्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, गुण्डागर्दी गर्नेजस्ता चरित्रहीन घटना प्रेम र यौनका सामु गौण भए। कुनै व्यक्ति प्रसिद्ध छन् तर उसका प्रेम र कामवासनाका घटना बाहिर आयो भने सबै चौपट बन्छ। यस्तो किन हुन्छ त?
यसका पछाडि गहिरो मनोवैज्ञानिक कारण देखाउँछन् स्वामी अरुण।
प्रदर्शन कि गोप्य?
प्रेमलाई परेवा वा ढुकुरले जसरी प्रदर्शन गर्ने कि कागले जस्तो गोप्य राख्ने? यसमा फरकफरक तर्क छन्।
प्रेम गर्ने चिज हो, प्रदर्शन गर्ने चिज होइन भन्नेमा स्पष्ट छन्, आध्यात्मिक चिन्तक एवं प्राध्यापक शिवगोपाल रिसाल।
कसैले कसैप्रति द्वेष नराख्ने, सँगै तेज बढाउने, सँगै उन्नति गरौं भन्ने भाव बढाउने तŒव हो प्रेम। उनी वैदिक परम्परामा प्रेमको उच्च चेतना भए पनि अहिले खस्किएको देख्छन्। सूर्यले धर्तीलाई, नदीले समुद्रलाई, ग्रह र नक्षत्रले एकअर्कालाई गर्ने प्रेम उनका विचारमा शाश्वत हुन्। प्रकृतिको यो अलौकिक प्रेमबाट मान्छेले पनि सिक्नुपर्ने उनी सुझाउँछन्।
प्रेमका बारेमा ओशोको ओजपूर्ण अभिव्यक्तिबारे भने धेरैले चासो दिएनन्, त्यसको चर्चा पनि गरेनन्।
‘प्रेम गर्न छुट हुनुपर्छ। तर, प्रेममा शतप्रतिशत इमानदार हुनुपर्छ,’ उनी प्रेममा इमानको खडेरी देख्छन्।
कसैको विचार, व्यवहार, योग्यताले प्रभावित भएर वा ‘बायो इनर्जी’ मिलेर उत्पन्न हुन्छ, मानसिक प्रेम। अघिल्लो प्रेममा शारीरिक आकर्षण भएजस्तो यसमा बौद्धिक आकर्षणले नम्बर पाउँछ। तथापि यो प्रेम पनि ‘गिभ एन्ड टेक’ मै चलिरहेको हुन्छ, जुन दिन कुरा मिल्दैन, छुट्टिन्छ। यस्तो प्रेमलाई अस्थायी प्रकृतिको प्रेम भन्न रुचाउँछन् अरुण। भन्छन्, ‘आध्यात्मिक प्रेम शरीर र मनभन्दा माथिल्लो हो, जसको सम्बन्ध आत्मासँग हुन्छ। आमा–छोराको प्रेम वा गुरु–शिष्यको प्रेम यसको उदाहरण हो। सारा संसारलाई समान ढंगले प्रेम गर्न सक्ने सामर्थ्यका लागि यसको पनि साधना जरुरी हुन्छ।’
सामान्यतयाः गुण हेरेर, गुणबाट प्रभावित भएर मानिसले प्रेम गर्छ। प्राध्यापक रिसाल प्रश्न गर्छन्, ‘देखिएको गुण पछि नदेखिन सक्छ, हराउन सक्छ, गुणी आफैंले त्यो गुण छाडिदिन सक्छ। त्यस्तो बेला प्रेमलाई पनि गुणसँगै सती पठाइदिने? दानी मानिस भोलि कन्जुस हुनसक्छ, सुन्दर मानिस भोलि रोगका कारण कुरुप हुन सक्छ, धनी मानिस गरिब हुन सक्छ। विद्या, बुद्धि, दया, धन, शैक्षिक योग्यता आदि देखेर कसैलाई प्रेम गर्नुलाई पनि वास्तविक प्रेम भन्न मिल्दैन। गुण त स्वार्थमा उपयोगी हुन्छ।’
‘डबली नभए प्रतिभा कहाँ देखाउने? प्रेम पनि प्रतिभा हो, सिर्जना हो। यसको अभिव्यक्ति कसरी गर्ने? प्रेमको निकास चाहिँदैन?,’ उनीसँग प्रश्नैप्रश्न छ। प्रेम प्रकट गर्ने अवसर नपाएपछि मान्छे रोगी बन्छ, उदास बन्छ र समाजप्रति नकारात्मक हुँदै जान्छ।
प्रेमबिनाको संसार उनको आँखामा कुरूप, दुःखी छ र उजाड छ। उनी यो पनि मान्छिन्, सभ्य प्रेम सार्वजनिक गर्दा केही फरक पर्दैन। र, प्रेमको विज्ञापन नगरे पनि जाति नै हुन्छ। आफसेआफ निस्किएको, दायरामा रहेर गरिएको प्रेम सकारात्मक र सिर्जनशील वातावरणका लागि लाभदायक छ। सरकारले प्रेम गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने नियम बनाउनुभन्दा प्रेम अभिव्यक्त हुने पार्क, हरियाली, ताल र चराको चिर्बिराहट सुनिने ‘रोमान्टिक’ स्थान तोकिदिनु उचित हुने ‘आइडिया’ दिन्छिन् मोमिला। प्रेमलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा उन्मुक्त उडान भर्न खुला आकाशको अवसर दिनुपर्ने उनको माग छ।
समाज संस्कार र परम्पराले जकडिएको छ। यसलाई एकैचोटमा छिनाल्न, चुँडाल्न वा बढार्न सकिँदैन। संस्कार परिवर्तन हुँदै जाँदा यसले आफूलाई सँगसँगै लैजान सकेन भने विकृति अवश्यंभावी छ। अहिलेको सहरी अवस्था ठिक यही समस्याबीच गुजि्ररहेको छ। परिवर्तन र बढ्दो खुलापनले समाजमा प्रेम बिस्तारै खुल्दै जाने क्रममा छ तर त्यसले चलमलाउने ठाउँ पाएको छैन।
– ‘मलाई प्रेम गर’ भन्दै भिख माग्नेहरू बढे। पतिपत्नी एकअर्कासँग प्रेमको भिख माग्छन्। दुवैले झोली फैलाएपछि त जीवनमा कलह, द्वन्द्व नभएर के हुन्छ? प्रेम भिक्षा होइन, दान हो भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। तर हामीलाई बच्चैदेखि माग्न सिकाइएको छ। प्रेम मागेर पाइँंदैन, नपाएपछि अरू माग बढ्छ।